“Waxaa jira wasaarado aan xafiisyo ku lahayn Ceerigaabo foojarrada suuqa ayay isuduweyaashu ku saxeexaan”…. | SDWO.COM & SomalilandNews.net
“Waxaa jira wasaarado aan xafiisyo ku lahayn Ceerigaabo foojarrada suuqa ayay isuduweyaashu ku saxeexaan”….
Published on September 12, 2018 by sdwo · No Comments
Ceerigaabo (SDWO): Badhasaabka gobolka Sanaag ayaa sheegay in xafiisyo ay lahaayeen wasaaradaha dawladda oo ku yaalla magaaladda Ceerigaabo aan wax shaqo ah lagu qaban, kuwaasoo aad u dayacan qaarkoodna ay dumeen ba.
Maxamed Axmed Caalin (Tiimbaro), waxa uu xusay in saddex wasaaradaha ganacsiga, dalxiiska iyo wershaduhu aanay wax xafiis ah ku lahayn Ceerigaabo, isla markaana ay suuqa ugu saxeexaan waraaqaha dadka ganacsatadda ah.
Badhasaabka Sanaag waxa uu sidan ku sheegay mar uu warbixin siinayay wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yoonis, oo maanta safar shaqo ku tegay magaaladda Ceerigaabo, isagoo uu wehelinayay wasiir ku xigeenka wasaaradda qorshaynta qaranka.
Halkan Ka Daawo Tiimbaro Oo Arrimahaas Ka Hadlaya: